10 Yemagariro Midhiya Matekisheni ayo Anowedzera Kugoverana uye Kutendeuka | Martech Zone
10 Yemagariro Midhiya Matekisheni ayo Anowedzera Kugoverana uye Kutendeuka
Chishanu, June 11, 2021 Chitatu, October 13, 2021 Rekha Pant
Kupesana nekutenda kwakakurumbira, kushambadzira midhiya enhau hakusi kungoenderana nezvako zvinyorwa online. Iwe unofanirwa kuuya nezviri mukati zvinogadzira uye zvine simba - chimwe chinhu chinoita kuti vanhu vade kutora matanho. Zvinogona kuve zvakapusa kunge munhu achigovana yako posvo kana kutanga shanduko. Zvishoma zvinodiwa uye makomendi hazvina kukwana. Ehe, chinangwa ndechekuenda kuhutachiona asi chii chinofanirwa kuitwa kuti zviite izvozvo?
Muchikamu chino, tinoyera pamusoro pemaitiro enhau enhau anowedzera ako masocial share uye shanduko. Tinoita sei kuti vanhu vaite chimwe chinhu nezvezvatinotumira? Chii chichavaita kuti vade kugovana posvo? Tiri kunyora pasi mamwe matipi anobatsira iwe:
Vanhu vane tsika yakasikwa yekumanikidza maonero avo pane vamwe. Kunyangwe izvo zvingaite senge zvinogumbura, unogona kushandisa izvi kubatsira uye kuitisa ongororo! Masocial media mapuratifomu anopa sarudzo kana ongororo ficha saka shandisa izvo. Iwe unogona kutumira nezve chimwe chinhu chakareruka senge iri nani nzvimbo yezororo, zvaunofanira kunwa, kana kana vachifunga kuti unofanirwa kucheka bvudzi rako kana kwete. Iwe unogona zvakare kushandisa izvi kuziva zvakawanda nezve zvavanofarira nekubvunza nezve mavara, zviitwa zvipi zvavanosarudza kuita, kana ndeapi masevhisi avanoda kuve nawo. Chinhu chakanaka pamusoro peongororo ndechekuti dzinouya semibvunzo isina kurongeka kuitira kuti vanhu vasatya kupa masendi avo maviri.
Vakumbire kuti vapinde Makwikwi
Mazhinji mabloggi akawana vateveri nekutanga makwikwi. Izvi zvinowedzera kuvapo kwako pamhepo, uye unowana shanduko mune imwe nguva nekuti vashanyi vepeji rako vanofanirwa kuita chimwe chinhu kuti vagove chikamu chemakwikwi. Iwe unogona zvakare kushandisa uno mukana kusimudzira peji rako uye nekuvandudza kwete chete izvo zvekuda uye zvekugovana asiwo mitengo yekutendeuka.
Kutanga Q&A Zvikamu
Kana iwe uchida kudzamisa ruzivo rwako nezve chimiro chevanhu vanoshanyira kana kurongedza kupfuura zvakapfuura zvako zvinyorwa, bata mubvunzo uye mhinduro chikamu. Izvi zvinoshanda nekuti kunyangwe vachizvibvuma kana kwete, vanhu vanozvida chaizvo kana mumwe munhu akabvunza maonero avo. Chimwe chidikanwi chinozadzikiswa kana mumwe munhu akavabvunza kujekeswa. Iyi inzira yakanaka kwazvo yekuti iwe urambe uchinzwisisa vanhu vari munetiweki yako uye nekuuya nemazano anozobatsira ako epamberi mamodhi maitiro.
Unotora Mifananidzo Iyo Kufamba?
Nezvo, isu zvinoreva, upload mavhidhiyo. Mufananidzo wakanaka, asi hatigone kuramba kuti huwandu hukuru hwevashandisi vepamhepo vanofarira zvemukati mevhidhiyo. Zvinoenderana neongororo yakaitwa neSocial Media Examiner isu tese tinoziva seFacebook, vashandisi vanoshandisa maawa zana emamirioni e vachiona mavhidhiyo zuva rega rega. Tora mukana weizvi uye wedzera yako ekushandurwa mitengo nekukodha mamwe mavhidhiyo!
Chikwereti chemufananidzo: Buffer Yemagariro
Kana iwe uchingotumira kamwe chete pasvondo saka hazvishamise kuti kuvepo kwako pamhepo kwakaderera. Chinhu chakanyanya kukosha chaunofanira kufunga nezvacho ndeichi: yako yemagariro midhiya kubatanidzwa yakabatana zvakananga kune kuwanda kwemapositi ako. Zvino, iyo frequency inoenderana nesocial media chikuva chauri kushandisa. Kana iri Facebook, unogona kutumira kamwe chete pazuva asi kana uri kushandisa Twitter, ungangoda kutumira kanenge kamwe chete maawa maviri kuti urambe uripo online.
Nezvose zviri kukurumidza-kumhanya, vanhu vave vasingashiviriri. Chikafu chinokurumidza chinotorwa zviri nyore pamusoro pekudyira kwakanaka nekuti vanhu havachadi kumirira chikafu chavo. Izvo zvinoenda kune izvo zvatinoisa online. Kana zvanyanya kutaura, vimba kuti vanhu vanongo pfuura nepfuura. Kugadzirisa izvi, chinja iyo chinyorwa mu infographic. Chimiro chekuona cheruzivo muchimiro chehuwandu hwehuwandu, data, kana kuenzanisa zvinonyanya kunakidzwa nevaverengi, nekudaro infographic yakakosha. Zvekugadzira mifananidzo, unogona kudonhedza nemidziyo senge Canva uye uwane kurudziro pamaitiro ekugadzira infographics iyo isingobate chete kutarisisa asiwo inowedzera kutendeuka.
Kuseka ndiko Kwakanyanya Mushonga
Wese munhu anoda kuseka kwakanaka nguva nenguva uye saka isa maGIF maficha kana memes pese paunogona. Iwe unogona kuita izvi kuti utore imwe kuseka pane yako posvo. Zvino, izvi hazvisi zvekungoseka vanhu; zviri zvakare zvekuratidza vanhu kuti unosvikika kuti une humwe mauri. Vanosekesa vanhu vanogara vari nyore kuwirirana navo. Iwe unozoshamisika nekukurumidza sei migove uye shanduko zvinowedzera kana iwe uchinge waisa meme.
Ita kuti zvive nyore kuti Vanhu Vagovane Zvako Zvinyorwa
Imwe yemakanganiso akajairika anoitwa nevaparidzi kurodha zvirimo uye kutarisira kuti vanhu vawane panowanikwa bhatani rekugovana. Kunyangwe iwe uri pasocial media chikuva kana webhusaiti, ita shuwa kuti ako ehukama ekugovana mabhatani anoonekwa.
Kurumidza Kana Kupindura Mamessage
Ita shuwa kuti iwe pindura kumeseji uye makomendi ipapo ipapo. Vanhu vane yakaderera kutarisisa spans uye vanorasikirwa nechido kana mumwe munhu achitora nguva refu kuti apindure mibvunzo yavo. Kupindura meseji nekukasira, iwe unopa fungidziro yekuti uri kushinga online uye kuti iwe unokwanisa kuvapa zvavanoda chero nguva. Iwe unogona zvakare kumisikidza auto-mhinduro kuti uvazive kuti iwe waona yavo meseji uye iwe uchavapindura kwavari iyo nguva iwe yaunowanikwa. Izvo zvichiri nani zvichienzaniswa ne "zvoonekwa" zvinopinda pabhokisi remessage nekuti izvo zvichavaita kuti vanzwe kuti urikuregeredza nemaune.
Gara Uchiratidza Mutsa
Funga nezvenhoroondo dzezvekudyidzana dzaunoteedzera. Sei uchivatevera? Iva mhando yemagariro enhau account yaunogara uchida kuwana zvinyorwa kubva. Gara uchiita hurukuro, uye taga vanhu vaunotora nekuti izvi zvichaita kuti vanzwe kuti unovakoshesa nekuvaremekedza. Isa mubhadharo pane zvisikwa zvemukati, uye kusimudzira vamwe kunyanya kana iwe uchifunga kuti basa ravo ndechimwe chinhu chingafarirwa nevateveri vako. Ipa rupo nekugovana nyaya, nzwisiso, ruzivo, zvinhu zvinozove zvakakosha kune vateveri vako. Kana iwe usingatyi kusimudzira vamwe, vateveri vako vanonzwa izvi uye zvichavaita kuti vade kugovana zvaunotumira zvakanyanya.
kuburitsa: Martech Zone's yakabatana link ye Canva inoshandiswa muchinyorwa chino.
Tags: kukurudzira zvikamubuffermakwikwikusetsamifananidzowedzera kutendeukamutsaKushambadzira Infographicspost frequencyq & A zvikamumubvunzo nemhindurokugoveranamifananidzo yemagariromagariro enhaumagariro enhau kugovanasurvey
Rekha Pant, inyanzvi yeIT, B.Tech anobva kuRGPV University, Bhopal, India. Pamwe pamwe nebasa rake reIT, akazozvishandurawo kuti ave munyori anotsetsenura achivhara misoro dzakasiyana muDhijitari Kutaurirana, Dzidzo, Kushambadzira uye IT. Netarenda rake risingawanzo, akaburitsa ace blog zvidimbu semushanyi pane mazhinji mawebhusaiti.
Dhijitari Kuchengeta Imba: Maitiro Ekushambadzira Yako Post-COVID Imba Yekudzoka Kwakakodzera
Kuwedzera Email Preheader Yakawedzera Yangu Inbox Kuiswa Rate ne15%